चार नातिनातिनाका हजुरबा राता मकै भन्छन्, मेरी श्रीमती जति छोराछोरी पायो उति च्वाँक– जन्मदिन वार्ता - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
१४ असार २०७४, बुधबार १७:०२ 13
हाँस्य कलाकार किरण केसी उर्फ राता मकै, चिकेन चिल्ली असार १५ गते ६० वर्षमा प्रवेश गर्दैछन् । असार १५ मा नयाँ बानेश्वरको ईन्द्रेणी फुडल्याण्डमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दै उनले ६० औँ जन्मदिन मनाउँदैछन् । चार दशक भन्दा बढी समय कलाकारितामा बिताएका किरण केसीले ६० औँ जन्मदिनको अवसर पारेर हामीसँग केही व्यक्तिगत र पारिवारिक कुराहरु सेयर गरेका छन् ।
एसएलसीमा चार पटक फेल भएँ
मैले एस एल सीमा चार पटक फेल भएका कारण पढाईलाई अघि बढाउन सकिन । मलाई परिवारले पढाउन नसकेर मैलै पढ्न नसकेको पनि हैन । मलाई पढ्नै नआएर, पढ्नै मन नलागेर नपढेको हो । मलाई कुनै पनि विषय मन पर्ने, नपर्ने भन्ने थिएन । मलाई किताब हेर्यो कि टाउको दुख्थ्यो । अहिले पनि टाउको दुख्छ । धेरै बेर किताब हेरेर बस्न सक्दिन । म एस एल सी भन्दा अगाडिको टेस्ट परीक्षा सम्म लगातार पास भएको थिएँ । तर एस एल सी भने मैलै पास गर्न सकिन । एक पटक दिँदा भएन, अर्को पटक दिँदा भएन, अर्को पटक दिँदा पनि भएन, फेरि अर्को पटक दिँदा पनि भएन । पछि त ह्या…. जति पटक दिँदा पनि भएन भनेर परीक्षा नै दिन छाडेँ । मलाई अहिले आएर भने शिक्षाको महत्व थाहा भएको छ । किनकी अहिले आएर आई फोन सेभेन, स्यामसुङ ग्यालेक्सी एस सेभेन जस्ता मोबाईलहरु चलाउनको लागि ए बाबु…… सिका त भनेर छोरा र नातिसँग साहारा लिनु पर्ने थिएन । तर अर्को हिसाबले मलाई नपढेकोमा पछुतो पनि फिटिक्कै हुँदैन । किन भने म सँग किताबी ज्ञान भन्दा व्यावहारिक ज्ञानहरु धेरै छन् । किताबी ज्ञानलाई नै फेल गराउन सक्ने क्षमता र ज्ञान छ मसँग । तर किताबी ज्ञान चाहि चाहिने कुरा हो । म संसारका झण्डै ४३ वटा देश घुमेँ । ६५ वटा स्वदेशका जिल्ला घुमेँ । तर मलाई हरेक देशको भाषा र त्यहाँको चालचलनबारे जानकारी भएको भए त्यो घुमाई अझै मजेदार हुने थियो भन्ने लाग्यो । तर म समूहमा जाने भएका कारण त्यस्तो अप्ठ्यारो भने भएको छैन ।
फेरि विदेश जाँदा अंग्रेजी नआउने पनि हैन । मलाई आउँछ । म त्यस्तो निल पनि हैन अंग्रेजीमा । मैलै नेवारी भाषाको गीत गाएको छु । अंग्रेजीमा नाटक गर्ने भनेर हामीले रिहल्सन पनि गरेका थियौँ ‘रिमोट कन्ट्रोल’ नामको नाटक । देशमा पढेकाले के गरेका छन् खै ? अस्ति खनेको ढलको तुरुन्तै समाचार बनाएर धुलो बन्द गरे की, जनताको लागि संसारकै नम्बर वान देश बनाईदिए की, पढे लेखेकाले । मैलै च्यालेन्ज गरेको पनि हैन । यसको अनर्थ नलागोस् । गौतम बुद्धले पनि एस एल सी पास गरेका थिएनन् क्यारे । तर उनको अनुशरण, उनको निती, उनको विचार संसारभरि लागु भयो । हाम्रो आराध्य देव भगवान पशुपति नाथले पनि कुनै सर्टिफिकेट लिएका थिएनन् । उनी पुजनिय, ढोगनिय बने । मैलै यी मुर्धन्य व्यक्तिको साहारा लिएर मेरो बिग्रेको पढाईमा गर्व गर्न खोजेको पनि हैन । संसारको धनि मानिस बिल गेट्सले पनि एम एम पास गरेको छैन । लक्ष्मी पूजा पनि गरेको छैन । तै पनि ऊ संसारकै धनी बन्यो ।
म फेरि भन्छु शिक्षा अति नै आवश्यक कुरा हो । यसले धेरै राम्रो निर्णय लिने क्षमताको विकास गरिदिन्छ । परेको बेला सहन सक्ने शक्ति दिन्छ । यो त एउटा ईनर्जी नै हो । पखाला लाग्ने बेलामा जीवन जलको जति आवश्यकता हुन्छ नि जीवनमा समस्या परेको बेलामा शिक्षा पनि त्यस्तै साहारा हो । व्यावहारिक ज्ञानसँगसँगै किताबी ज्ञान पनि मिसाएर अघि बढ्यो भने त्यो मान्छे सार्थक र सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
श्रीमती र जेठा छोरा बुहारीसँग किरण केसी
मेरी च्वाँक श्रीमती र छोराछोरी
मैलै मागी विवाह गरेको हो । म मेरो श्रीमतीको एकदमै सम्मान गर्छु । अति आदरणीय, पुजनिय मेरी श्रीमती हुन् सीता केसी । उनी सधैँ सीता बनिन् म राम बन्न सकिन । तर अहिले सम्म राम बन्ने मेरो कोसिस जारी छ । हाम्रो जोडी मिलाईदिएकोमा म भगवानलाई पनि धन्यवाद भन्छु । हामीलाई भेटाईदिने लमीलाई पनि म धेरै–धेरै धन्यवाद भन्छु । लमी मेरो आफ्नै सानीमा हो । सानीमा अहिले स्वर्गमा हुनुहुन्छ । उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ खुशी मिलोस् भन्ने मेरो कामना छ ।
मनमा एकदमै धेरै सकारात्मक कुराहरु भएकी श्रीमती मैलै पाएको छु । मैलै त श्रीमतीलाई बुढी पनि भन्दिन, आमा भन्छु । किन भने मलाई मेरो आमाले जुन किसिमले हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो त्यहि किसिमको हेरचाह उनले पनि गर्छिन् । अझ साँच्ची नै भन्ने हो भने आमाको भन्दा अझ एक लेवल माथिको हेरचाह पाईराको छु । यहि कारण मैलै उनलाई आमाको संज्ञा दिएको हुँ । उनी एउटा असल आमा बन्न सकिन् । एउटा असल श्रीमती बन्न सकिन् । अहिले चाहि उनी हाउस वाईफ छिन् । घरको सम्पूर्ण काम उनले गर्छिन् । बाहिरको काम मैलै गरिराको छु ।
मलाई छोराछोरी धेरै नै पाउने ईच्छा थियो तर बुढी मानिनन् (लामो हाँसो) । म मा त्यस्तो कमी कमजोरी पनि थिएन । जति पाए नी हुन्थ्यो । १९ वर्षमा विवाह गरेको २० वर्षमा छोरी जन्माको । २१ वर्षमा दोस्रो छोरा र २२ वर्षमा तेस्रो छोरा जन्माको अनि २३ बाट बन्द भाको (लामो हाँसो) । बुढी त जति बच्चा पायो त्यति राम्री, जति बच्च पायो त्यति राम्री । मान्छेहरुको पोतो आएर अनुहार बिग्रिन्छ । मेरी बुढीलाई त केही पनि भएन । म असार १५ गतेबाट ५९ पूरा पुगेर ६० लाग्छु । उनी म भन्दा ३ वर्ष कान्छी छन् । अर्थात उनी ५७ वर्षकी भईन् । उनलाई खाको लाको एकदमै सुहाउँछ । एकदमै राम्री श्रीमती मेरो भागमा पारिदिएकोमा म भगवानलाई धेरै–धेरै धन्यवाद भन्छु म । ज्यादै च्वाँकै परि के बुढी त मेरो ! तीनवटा बच्चाको आमा हुँदा पनि नराम्री भईन त अनि । उसको सधैँ सकारात्मक विचार रह्यो । बरु कहिले काही म बेईमान भएँ होला ।
पहिलो सन्तान छोरी भएपछि मलाई धेरै राम्रो भयो । म नारीलाई एकदमै सम्मान गर्छु । यहि कारण पनि मेरो घरमा छोरीको आगमन भएपछि आर्थिक ढोकाहरु खुले । मेरा योजनाका ढोकाहरु खुले । मैलै गर्न लाएका कार्य सफलताका ढोकाहरु खुले । अहिले छोरीलाई एक रोपनी ६ आनाको जग्गामा चार तलाको घर बनाएर राखेको छु । छोरीले बिजनेस पढेकी छे । जेठो छोरो अमेरिकामा छ । उसको जन्म २०३४ सालमा भएको हो । उसले अमेरिकाको नागरिकता पनि लिईसकेको छ । अनि २०३६ सालमा जन्मेको कान्छो छोरो नेपालमै छ । उसले ईभेन्टको काम गर्दै आईरहेको छ । छोरा र छोरीका गरेर चारवटा नाति नातिना छन् मेरा ।
राम्रो मान्छेलाई किन नहेर्ने ?
राम्रो मान्छे देखेपछि त कसले नेहेर्ला र ? म पनि हेर्छु । घरमा बुढी च्वाँक छ भन्दैमा बाहिर राम्री केटी देखेपछि नहेर्ने भन्ने हुँदैन । घरको बगैँचालाई मात्रै बगैँचा मान्ने अनि रत्नपार्कको बगैँचा, पाँच तारे होटेलको बगैँचा चाहि हेर्दै नर्हेनी त हुँदैन नि ! तर कुरा बगैँचालाई कसरी हेर्ने ? भन्नेमा फरक पर्छ । आहा ! कति राम्रो, भनेर त्यसलाई त्यहिको त्यहि छोडिदिनी र आहा ! कति राम्रो भनेर अर्कै घरजम गर्न खोज्ने कुरा फरक हुन् । राम्रो फूल देख्दैमा त्यसलाई चुँडेर आफैसँग राख्न खोज्ने नजर चाहि छैन म सँग । राम्री मान्छेलाई नहेर्नी, राम्रो मान्छेलाई प्रशंसा नगर्ने को होला ? ब्रह्माण्डकै राम्री हैन पार्वती ? खै महादेवले पनि पार्वती हुँदा हुँदै अन्तै आँखा लगाएका थिए । मेरा कुरा गर्दा त अझ केटी साथीहरु बढी छन् । म एकदमै फ्र्यान्की छु । अनि कहिले काही श्रीमती शंका पनि गर्छिन् । फिल्म लाईनमा मेरा केटी साथीहरु छन् । उनीहरु पनि मसँग सिनियरको हिसाबले परामर्श लिन्छन् । कहाँ के गर्ने ? के नगर्ने ? सबै सुझाव सल्लाह दिन्छु ।
मारुनी नाचको सौखिन
मलाई बाल्यकाल देखि नै रत्यौलीमा मादल बजेको सुन्न हुँदैनथ्यो । नाचिहाल्थेँ म । देउसी भैलोमा पनि मलाई चासो थियो । म त मारुनी पनि नाच्थेँ । सारी लगाएर धोती लगाएर मारुनी बनिहाल्थेँ । म त भयङकर राम्रो नाच्ने मान्छे हो नि । मैले राष्ट्रिय नाचघरमा जागिर पनि खाएँ । हरिवंश आचार्य, म र शुशीला रायमाझीको एकैदिन नियुक्ति भएको थियो त्यहाँ । म चाहि हरिवंशहरु भन्दा एक पद माथि थिएँ । लगभग दुई वर्षजति म उनीहरु भन्दा माथिल्लो पदमा रहेर काम गरेँ । पछि हरिवंशले राजालाई देखाउने कार्यक्रम गरेपछि उसको त एकैचोटी मेरो लेवलको तलब भयो । पहिले मैले उसलाई पछि पारेको थिएँ । पछि त मलाई उसले छोडिदियो रेसमा ।
मैलै चारवर्ष राष्ट्रिय नाचघरमा जागिर खाएपछि छोडेँ र ब्यापारमा लागेँ । मैलै १४ वर्षको उमेरबाट यस क्षेत्रमा व्यावसायिक ढंगले काम गर्न थालेको हुँ । मेरो पहिलो टेलिफिल्म ‘१५ गते’ हो । त्यसपछि ‘लालपूर्जा’सँगै मह जोडीका अनगिन्ती सुपरडुपर हिट शोहरुमा काम गरेँ । मेरो ठूलो पर्दाको पहिलो सिनेमा चाहि अर्जुन श्रेष्ठको ‘सम्पति हो’ । आजसम्म मैलै झण्डै एक सय २५ वटा सिनेमामा काम गरेको छु । जिरे खुर्सानीलाई जोडेर झण्डै सात सय भाग टेलिसिरियलमा काम गरिसकेको छु । त्यस्तै मैलै तीनवटा गीतीसंग्रह सार्वजनिक गरेँ भने दुईवटा सिनेमा निर्माण पनि गरेँ ।
समाज सेवा मेरो खुशी
मेरो चरित्रको नाममा ललितपुरको ईमाडोलमा ‘राता मकै’ चोक स्थापना भएको छ । अनि मैलै सामाजिक सेवामा पनि केही कदम उठाएको छु । सामाजिक सेवा मेरो रुची र खुशी हो । मलाई पहिले देखि नै समाज सेवा गर्न मन लाग्थ्यो । मैलै ईमाडोल प्रहरी चौकी बनाएको छु । त्यसमा लगभग २८ लाख लगानी छ । अनि सात दोबाटो प्रंहरी चौकी पनि निर्माण गरेको छु । त्यो झण्डै २८ करोडको छ । धुर्मुस–सुन्तली अघि सबैभन्दा ठूलो रकम समाज सेवामा खर्च गर्ने कलाकार मै हो । अब भने उनीहरुले नमुना नेपाल बनाउने सोचेका छन् । केही बस्ती पनि बनाईसकेका छन् । मैलै पनि उनीहरुलाई केही रकम सहयोग गरेको छु । कलाकारिता पछि मलाई खुशी मिल्ने काम भनेको समाज सेवा हो । समाज सेवाले मलाई एकदमै ठूलो खुशी दिन्छ ।